Kutaurirana naJosé Zoilo Hernández, munyori we trilogy Las cenizas de Hispania | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Nhoroondo yaJosé Zoilo Hernández pa Twitter.
Iyo Tenerife Jose Zoilo Hernandez Akadzidza kuve biologist, asi nekufamba kwenguva uye kuda kwake nhoroondo, akafunga kunyora zvake. Uye anozviita. Yake yakabudirira trilogy Madota eHispania, iyo yakatanga ne Iyo alano, akaenderera mberi Mhute nesimbi uye apedza ne Njiva yekuguma kwenyika, yakamuisa pamusoro pevanyori vakakurumbira veiyo genre. Nhasi ndinokutendai nekundipa iyi hurukuro.
Mabhuku Nhau: Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga wakanyora chii
Jose Zoilo Hernandez: Ndinoyeuka zvine rudo mamwe echinyakare kubva pandakanga ndiri mudiki kwazvo, wandakazoona kuti zvaifadza sei kuverenga. "Mhepo muWillows" naKenneth Grahame; "The Little Vampire", rakanyorwa naAngel Sommer-Bodenburg, uye "Makumi matatu neshanu waMay", naErich Kästner. Zvakawanda gare gare ndakaverenga nhoroondo yangu yekutanga nhoroondo: "Akwira, wekupedzisira muRoma", rakanyorwa naRosemary Sutcliff.
Semwana mudiki ndaifarira kunyora nyaya pfupi, zvinhu zvevana; Asi kubva ipapo ndakanga ndisati ndafunga kuyedza kuisa nyaya pabepa zvakare kudzamara ndatanga kugadzira "Las ashes de Hispania". Saka isu taigona kutaura kuti yangu yekutanga novel yaive "El alano", kutanga kwetrilogy yangu.
KU: Izvo zvaive bhuku rekutanga rakakufadza uye nekuti?
M.R.: Ini ndingati yekutanga nhoroondo yenhoroondo yakaitwa kuti iwanikwe kwandiri: "Akwira, wekupedzisira muRoma." Yakavhura pamberi pangu nyika inokwezva kwazvo. Akakwanisa kundiratidza kuti zviviri zvandaifarira zvaigona kubatana, kune rumwe ruoko mabhuku uye kune rumwe, nhoroondo.
KU: Ndiani wako munyori anodiwa? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
M.R.: Kunyangwe chiri chokwadi kuti huwandu hwandinoda hwakakura, dai ndaifanira kugara neumwe ndaizozviita nawo Bernard Cornwell. Kubva mumaonero angu, hapana munhu anorondedzera kurwa saye, uye haape kudzika kune vake mavara sezvaanoita. Pedyo chaizvo, vangadai vari Colleen McCullough, Gisbert Haefs, Lindsey Davis kana Santiago Posteguillo.
KU: Chii munhu webhuku iwe ungadai wakada kuziva nekugadzira?
M.R.: Ndinofunga dai ndaigona ndaizosarudza maviri. Hunhu hwe Hannibal kubva mubhuku rezita rimwe chete Gisbert haefs; uye izvo zve Derfel cadarn, kubva kumatatu e "Makoronike aIshe weHondo", rakanyorwa naBernard Cornwell. Kubva pakubata kwangu iwo mavara maviri asingakundike.
KU: Vamwe mania pakunyora kana kuverenga?
M.R.: Kana ini ndiri mune "inobudirira kwazvo" nguva yekunyora, Ini ndinowanzo kukanganwa nemaune nhoroondo zororo iro patafura yemubhedha wangu. Ndino tarisa zvakanyanya panhau yandiri kugadzira zvekuti ndinodzivisa kunyura mune vamwe.
KU: Uye newe nzvimbo nenguva ndoda kuzviita?
M.R.: Kunyangwe chiri chinhu chandisingakwanise kuita kazhinji sezvandaida, Ini ndinoda kunyora kutanga kwevhiki. Simuka na7, gadzira kofi, gara muhofisi yangu padhuze neraibhurari yangu, batidza laptop ... uye dzokera kupasi rose kutenderera gumi kugadzirira kutanga zuva.
KU: Chii munyori kana bhuku rakakufurira mune rako basa semunyori?
M.R.: Kunyangwe chiri chinhu chandisina kumbomira kufunga nezvacho, ndinofungidzira izvo Rosemary sutcliff, sezvo iye aikonzeresa kudanana kwangu nenyaya yenhoroondo semuverengi; Alexander dumas, kubvira nguva pfupi yapfuura iya yekutanga ndakaverenga "Iwo Vatatu Musketeers" uye yakasimbisa kuti nhoroondo yenhoroondo yaive chinhu changu, uye pakupedzisira Bernard Cornwell.
KU: Wako kufarira mhando?
M.R.: Ini handina nzira yekuiviga: pasina kupokana, iyo nhoroondo yenhau. Zvinenge zvese zvandinoverenga zvine chekuita nemhando iyi. Ndakaverengawo kumwe kufungidzira, asi zvishoma nezvishoma.
KU: Chii uri kuverenga ikozvino? Uye kunyora?
M.R.: Izvozvi ndiri kuverenga "Nzeve yaKaputeni", naGisbert Haefs. Iyi inyaya nyowani yenyanzvi muMediterranean yekare, uye inobata pfungwa dzangu. Nezve izvo zvandiri kusvika izvozvi, ndiri kugadzirisa inoverengeka (nhoroondo, hongu) yandakatanga imwe nguva yapfuura uye ichazoburitswa gore rinouya, kunyangwe tichiri kufanira kudoma zuva racho. Imwe nguva yapfuura ndakati ndanga ndichinyatsofarira iro zana ramakore rechisere uye ndichiri kuzvichengeta.
KU: Unofunga kuti sei chiitiko chekutsikisa kune vanyori vakawanda variko kana iwe unoda kutsikisa?
M.R.: Ndinofunga isu takatarisana ne nhanho yakanaka kwazvo, yakavhurika uye ine mikana yakawanda. Kuzvitsikisa, Kwekutsikisa Kwechivanhu, Vanyori veHybrid; Ini ndinofunga kuti izvozvi pane mukana wekusarudza pakati pesarudzo dzakasiyana, izvo pasina mubvunzo dzinowedzeredza mikana iyo inoverengeka akanaka inogona kusvika kune vateereri vavo.
Ini ndinofunga muenzaniso wakanakisa ndeangu: Ndakatanga kuzvishambadzira, asi kubva ipapo zvichienda mberi, imba yekutsikisa yakakosha saEriciones B akafunga kubheja pandiri, munyori mutsva, nekuda kweunganidzwa wayo wenhoroondo. Ndinofunga kuti hakuna kumbove nemikana yakawanda kudaro yemanyowani akanaka, uye ndine hupfumi hwakawanda kuti ndisvike kuimba yekutsikisa uko kwakawanda kwandinozivisa zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kubvunzana naJosé Zoilo Hernández, munyori weiyo trilogy Las ashes de Hispania